Guddoomiyaha Sh/Hoose oo gaaray Magalada Marka lana kulmaya Maamulka – Radio Daljir
Guddoomiyaha Sh/Hoose oo gaaray Magalada Marka lana kulmaya Maamulka
May 13, 2019 9:32 b 0
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Maanta waxaa ay gaareen Magalada Marka ee Xarunta gobolka Shabeellaha Hoose,iyada oo halkaasi siweyn loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga oo ka ambabaxay deegaanada Sabiib iyo Caanoole ayaa gudodomiyaha waxa ku wehlinaya Senator Xuseen Cali Xaaji oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare,waxana Magaalada Marka kusoo dhaweeyey Maamulka degmada iyo saraakiisha Ciidamada xoogga dalka.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa shalay kormeer waxa uu ku tegay furumaha hore ee ciidanka Xoogga dalka ay lu leeyihiin deegaanada Sabiib iyo Caanoole si loo dhiira geliyo ciidanka ee dagaalka kula jira Shabaab.
Inta uu ku sugan yahay Magalada Marka Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa Maamulka degmada iyo saraakiisha Guutada 14-ka Octooper,isaga oo kala hadli doono sidii degmada Marka looga qaadi lahaa Go’doonka ay saareen Al-Shabaab.
Magalada Marka oo ah Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay soo martay dagaalo kala duwn haba ugu badnaadee dagaal u dhaxeeyey laba maleeshiyo beeleed iyo Ciidanka dowladda iyo Shabaab wallow haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada Guutada 14-ka Octooper oo kala wareegay Al-Shabaab.
Doodaha Daljir & Sharciga Doorashooyinka Dalka (dhegayso)
Askari lagu dilay Magaaladda Muqdisho